पल र वर्षा फिल्ममा कहिले आउने ? « Mazzako Online
पल र वर्षा फिल्ममा कहिले आउने ?
अभिनेता पल शाहले म यस्तो गीत गाउँछु २ को छायांकन सकेसँगै उनी फेरि म्यूजिक भिडियोमै रमाइरहेका छन् । पल म्यूजिक भिडियोमा खोजीने मोडल हुन् । तर, ठूलो पर्दाको सिनेमामा काम गरेपछि उनलाई भिडियो कम गर्न सुझाव नआएको होइन । तर, उनले यो कुरा सुनेका छैनन् । यही भएर पनि पल सोलो हिरो भएको सिनेमा चल्दैनन् ।
अहिले पल शाह र अभिनेत्री वर्षा राउतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भइरहेको छ । सिनेमा नाई नभन्नु ल ४ बाट नै वर्षा र पल एकसाथ सिनेमा क्षेत्रमा आएका थिए । यसपछि दुइले एकसाथ सिनेमामा काम गरेका छैनन् । तर, अहिले हेर्ने हो भने पल र वर्षाको म्यूजिक भिडियो आइरहेको छ ।
युवराज चौलागाइको मलमल सारीमा काम गरेका यी दुइले अहिले एउटा थारु भाषाको गीतमा पनि मोडलिङ गरेका छन् । पल र वर्षालाई दर्शकले ठूलो पर्दामा हेर्न चाहेका छन् । बरु, यतातिर पो सोच्ने हो कि पल र वर्षाले ? भिडियो एकसाथ खेल्दा दर्शक वाक्क होलान् है ।